३५ वर्षपछि घरेलु मैदानमा स्वर्ण जित्दाको खुशी ! (फोटोफिचर) - Sagarmatha Online News Portal
३५ वर्षपछि घरेलु मैदानमा स्वर्ण जित्दाको खुशी ! (फोटोफिचर)
काठमाडौं । नेपालले घरेलु मैदानमा दोस्रो पटक फुटबलमा स्वर्ण जितेको छ । समग्रमा चौथो स्वर्ण भए पनि घरेलु मैदानमा भने सन् १९८४ को पहिलो संस्करणपछि यसै वर्ष स्वर्ण जितेको हो ।
यसअघि सन् १९९९ मा आठौं संस्करणमा नेपाल फाइनल पुगे पनि बंगलादेशसंग १-० ले पराजित भएको थियो । यस पटक भने नेपालले भुटानलाई २-१ ले परजीत गर्दै घरेलु मैदानमा स्वर्ण जित्यो । यसबाहेक नेपालले सन् १९९३ र २०१६ मा पनि फुटबलमा स्वर्ण जितेको थियो ।
यस पटक ५ राष्ट्र सहभागी पुरुष फुटबलमा नेपालले अपराजित रहँदै स्वर्ण जितेको हो । दशरथ रंगशालमा करिब १५ हजार दर्शक अगाडि नेपाललाई स्वर्ण जिताउन अभिषेक रिजाल र सुनिल बलले गोल गरे । सन् १९९९ मा खेलाडीको रुपमा फाइनल हारेका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले यस पटक प्रशिक्षकको रुपमा स्वर्ण जिते ।
उनले खेलाडीको रुपमा सन् १९९३ मा भने स्वर्ण जितेका थिए । खेलाडीको रुपमा १९९३ मै स्वर्ण जितेका मृगेन्द्र मिश्र, राजेश मानन्धर यस पटक कोचिङ स्टाफका रुपमा थिए, भने राखेपका चिफ कोच मिलन भक्त हाडा टिमको सल्लाहकारका रुपमा थिए ।
समरको अन्त्यमा बिकिनीमा काजलको मस्ती
नायिका रश्मिको वाटर रोमान्स बोल्ड फोटो सुट [फोटोफिचर]
नयाँ लुक्समा मेपन्ची, उनलाई देखेर किन झुक्किन्छन् नेपालीहरु ? [फोटोफिचर]
अमेरिकी मोडल काइली जेनरले दिइन हट पोज
प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत विभाजनका लागि संसदले यसरी गर्यो तयारी